एलआईसीले पहिलो त्रैमासिकमा नै ४ अर्ब २० करोड बिमा शुल्क आर्जन गर्यो – Hotpati Media
एलआईसीले पहिलो त्रैमासिकमा नै ४ अर्ब २० करोड बिमा शुल्क आर्जन गर्यो
१४ माघ २०७६, मंगलवार ०५:३० मा प्रकाशित (1 वर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ३ मिनेट
काठमाण्डौँ-लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी) नेपालले आ.ब. २०७४/७५ बाट लागू हुने गरी न्युनतम बोनसदर रु. ६६ प्रति हजार भएको बताएको छ ।
कम्पनिले सवै बीमा पोलिसीहरुमा बीमा अवधि अनुसार न्युनतम् बोनसदर प्रतिहजार रु. ६६ देखि अधिकतम् प्रतिहजार रु. ८५ सुनिश्चित लाभसम्म कायम गरिएको जनाएको छ ।
कम्पनीमा कम्तीमा ५ वर्ष र वढीमा २५ वर्ष अवधिका बीमा योजनाहरु छन् । ५ वर्ष अवधिका सवै बीमालेखमा प्रतिहजार रु. ६६ बोनस, २० वर्ष अवधिको जीवन तरङ्ग (पेन्सन) योजनामा प्रतिहजार रु. ७७ बोनस र ५ वर्ष अवधिको जीवन आस्था योजनामा प्रतिहजार रु. ८५ सुनिश्चित लाभ प्रदान गरिने एलआईसी नेपालले दावी गरेको छ ।
सवै कम्पनीहरुले बोनसदर हरेक वर्ष बीमकको मुनाफा अनुसार परिमार्जन गरी बीमा समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गरेका हुन्छन् भने सुनिश्चित लाभ अपरिवर्तनिय प्रतिफल हो जुन बीमा लिंदा तोकिएको छ सो पुरा अवधिसम्म लागू हुन्छ ।
एलआईसी नेपालले पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ४ अर्ब २० करोड बिमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ जुन अघिल्लो बर्षको भन्दा ४४.८२ प्रतिशतले बढि हो । गत बर्षको पहिलो त्रैमासमा कम्पनिले २ अर्ब ९० करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।
त्यस्तै, कम्पनिले चालु आ.ब. २०७६/७७ को पौष मसान्त सम्ममा करिब ७ अर्ब ६९ करोड कूल बीमा शुल्क आर्जन गर्दै करिव रु. ६१ अर्ब ८४ करोड ५६ लाखको जीवन बीमा कोष बनाउन सफल भएको बताएको छ । एलआईसी नेपालले दोस्रो त्रैमासिकको संक्षिप्त वित्तीय विवरण माघ महिनाभित्रै प्रकाशित गरीने जानकारी दिएको छ ।
बिमा कम्पनीहरुमध्ये दोस्रो ठुलो चुक्ता पुँजी भएको एलआईसी नेपालको हालसम्म २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुगेको छ ।
स्थापनाको १९औ वर्षमा प्रवेश गरेको एलआईसी नेपालले हाल देशभर रहेका ७४ शाखा कार्यालयहरु मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।